Mikel Arteta Oo Qirtay In Uu Kooxdiisa La Daadagay “Koox Liidataan Nahay” – Heemaal News Network
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ka yaabiyey taageereyaasha kooxdiisa, waxaana uu qirtay in Liverpool ay tiro goolal ka badan intii ay xalay ku garaaceen ay kaga badin karayeen.
Laba gool oo uu ka dhaliyey Diogo Jota oo beddel kusoo galay iyo mid saddexaad oo uu ku daray Mohamed Salah ayay Liverpool kaga adkaatay Arsenal oo joogta garoonkeeda Emirates Stadium.
Mikel Arteta oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisu ay nasiib lahayd haddii saddex gool kaliya lagaga badiyey, waxaanu qiray in Liverpool ay fursado kale oo ay goolal dhalin karayeen ay heleen.
“Liverpool way u qalmaysay inay guuleysato, waxaana suurtogal ahayd inay farqi intan ka badan ku adkaan karaysay. Way nagaga fiicnaayeen qayb kasta, annaguna si aad ah ayaanu u liidanay.” Ayuu yidhi Mikel Arteta.
Arteta waxa uu sheegay in kooxdiisu aanay u muuqanin koox la heer ah Liverpool, waxaanu yidhi: “Marka aanad samaynin waxyaabihii aasaasiga ahaa ee saxda ahaa ee aad ku waajihi lahayd koox heerkan oo kale, ma helaysid fursad aad ku tartanto. Waxa dhacayna waa taas.
“Waan u hambalyaynayaa Liverpool oo maanta aad u wanaagsanayd”
Guul-darrada soo gaadhay kooxdiisa ayuu ku sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa, waxaanu yidhi: “Waxa laga yaabaa in guul-darradani ahayd middii ugu xumayd ee nasoo marta, anigana way iga yaabisay.
“Guul-darro kasta xanuun ayay leedahay laakiin tani si aad ah ayay ii dhaawacday sababtoo ah sawirka aannu muujinay iyo sida aanaan u caddaynin waxa aanu doonayno.”
Intaa kaddib waxa uu raalligelin u diray taageereyaasha kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waxaanu u baahanahay in aanu raalligelino dadkayaga iyo taageereyaashayada.”
Maalmulka Galmud Oo Ka Hadlay Dagaalada Ka Socda Galguduud